Olee otú Tinye Image na faịlụ MP3 Mfe
> Resource> MP3> Olee otú iji Easily Tinye Image niile gị na MP3 Files
"Olee otú ịgbakwunye ihe oyiyi a .mp3 ụda faịlụ?
Hi, m nwere otu ajụjụ. M converted a otutu m iTunes music ka .mp3, otú m nwere ike tinye ihe album cover na faịlụ? Achọrọ m etinye songs na m PS3 on Christmas ma m chọrọ ịhụ album-ekpuchi ma na ihe. Ekele! "- Dakota
Onye ọ bụla nwere otu nsogbu na Dakota? M nwere tupu ma ugbu a m na-ahụ na-agbakwụnye a ọhụrụ oyiyi ma ọ bụ na-agbanwe agbanwe ẹdude album image nnọọ a fun na mfe ihe na-eme. The Wondershare TidyMyMusic maka Mac (Wondershare TidyMyMusic) bụ ihe na-eme ka ọrụ a mfe. Ọ na-akpaghị aka okụt album nkà maka ihe niile m MP3 faịlụ na-enye m ikike ịgbanwe oyiyi dị ka m na-ahọrọ. Soro m na m ga-egosi gị otú iji ya n'okpuru.
1 Tinye gị music n'ọbá akwụkwọ ka usoro ihe omume
Download a usoro iji wụnye na gị Mac. Mgbe ahụ na-emeghe ya na ọ ga-smartly iṅomi gị iTunes n'ọbá akwụkwọ ịgbakwunye egwu niile na. Ma oge ọzọ ị na-emeghe ya ọzọ, ọ ga-ekpeghachi scanning usoro bụrụ na ị tụbatara ihe songs ka iTunes.
Rịba ama: N'ihi na faịlụ MP3 na-adịghị jisiri site iTunes, ị nwere ike ịga idozi Music mbubata songs site onwe gị. Ịdọrọ na dobe music nchekwa na faịlụ tree ma ọ bụ pịa Open File button ka ịgbakwunye music faịlụ.
2 Chọta ihe oyiyi maka niile MP3 faịlụ
Nke a na usoro nwere ike na-akpaghị aka chọta oyiyi maka gị niile MP3 faịlụ. Tinye akà rà checkbox nke Chọọ maka unidentified Songs na pịa iṅomi button, mgbe ahụ, ọ ga-amalite ọrụ. N'oge usoro, ozi niile banyere MP3 faịlụ nwere ike chọpụtara, gụnyere track aha, artists, lyrics nakwa album nkà.
3 Tinye oyiyi na faịlụ MP3
Ị nwere ike embed oyiyi na faịlụ MP3 mgbe ha na-achọta nke mere na ihe oyiyi a pụrụ kpọfere na egosipụta na gị na obere ngwaọrụ. Pịa a song na ego onyinyo ya na nri n'igbe. Wee pịa Mee bọtịnụ na ala ka ịgbakwunye image ka MP3 faịlụ. I nwekwara ike họrọ ọtụtụ songs ma na-etinye na oge.
Cheta na: Ọ bụrụ na ị chọrọ ịgbanwe ẹdude oyiyi, dị nnọọ pịa a song na Dezie icon na nri n'igbe nke i nwere ike ịdọrọ a Obodo image faịlụ ka album nkà ebe ma jupụta na ndị ọzọ na-edezi ubi.
Ike na-eche ka a na-agbalị ugbu a? Dị nnọọ na-aga n'ihu na ibudata ya iji wụnye na gị Mac, mgbe ahụ, ị ​​pụkwara ịhụ na-agbakwunye oyiyi na mp3 ihe na-akpali ihe na-eme.